ISalda Ski Resort Ilungele iXesha
ISalda Lake eBurdur ejonge ngaphaya kwamawaka angama-900 ukuphakama kweSalda Ski Centre evule ixesha Ehlotyeni chibi ngo Turkey Salt uthe ngelixa ngokundwendwela i Maldives 1 yezigidi 400 amawaka abantu, ixesha lasebusika [More ...]
U-risdris Akbıyık, iRhuluneli yaseHakkri, uphonononge utyalomali oluqhubekayo kunye nolutsha kwiZiko leMerga Butan Ski ekuphakameni kwe2.500. I-Rhuluneli u-Akbiyik, Umtshutshisi oyiNtloko woLuntu u-Mustafa Balik, uSekela-Rhuluneli u-Mustafa Duruk, [More ...]
Umkhosi we-2 wamawaka asixhenxe Çambaşı Plateau 650 eyakhelwe kwindawo eguqukayo exerciseambaşı Ubusika beMidlalo kunye nokuzivocavoca kweSki Center, ayikhange uyifune inyaniso. UkuKhangela kukaMasipala wase-Metropolitan kunye namaQela okuhlangula kulomthambo [More ...]
IZiko loKhenketho lweMidlalo yoBusika yaseDarraz yoLwakhiwo lwe-5 yoomatshini nezixhobo (ukuthathwa kwemizila yokuhambisa amandla kunye nezinye izibonelelo ezongezelelweyo) Isparta Special Provincial Provincial Investment. [More ...]
Isikhungo seSarikamis Ski Cha Chaiftift yabanjwa: I-3 I-Chairlift yeSamikamis Ski Centre, eyathengiswa ngo-Novemba, izakugqitywa kwaye ifakwe kwinkonzo emva kweenyanga ze-2. ISarikamis Cibiltepe iSpanish Resort 2. NgoSeptemba kwisikhululo esiphezulu senqanaba 13 [More ...]
I-Trabzonspor Davraz Camp yayinoxinzelelo ngokuhamba ngenqwelomoya: I-Trabzonspor Isparta Davraz inkampu ngelixa ilungiselela isizini entsha namhlanje, igxininiswe kukuhamba ngenqwelomoya. Amalungiselelo aqhubekekayo esizini entsha e-Isparta Davraz [More ...]
Xa 24 2012 Meyi LEITNER e Bursa, Turkey iye yenziwa ukuvulwa ngokusemthethweni. Iinkampani eziphambili Leitner ngayo kwicandelo imoto intambo e Bursa, Turkey iyaqhubeka ukusebenza kwi-ofisi. ropeways LEITNER sele kuza kucaca eTurkey kwiindawo ezintathu. Zizo ezi: [More ...]
Utyalomali lwenkqubo yoololiwe luya kuxolelwa ekutyalomali kwinkqubo ye-VAT yoLoliwe eya kwenziwa ngaphakathi komda weethagethi ye-2023 iya kuxolelwa kwi-VAT. Oomasipala bayakuxhamla kukhuthazo lokukhululwa kukaRhulumente kwi-VAT kwinkqubo yeziseko zendlela yokusebenza ngaphakathi kweeprojekthi ze-2023 [More ...]
Yintoni isithukuthezi? Ezona zifakwe kwiindawo zokuchithela ski uninzi lwezitulo, ngelixa ezo zisebenza phakathi kweenkampu kunye neendawo zokuhlala uninzi lwazo luneekhabhathi ezincinci. Kwamanye amazwe [More ...]